Semalt Inoratidzira Kusiyana pakati peSeO ne SMM
Zvizhinji zvebhizinesi zvinoda kubudirira mukutengesa kweInternet. Zvisinei, kubudirirapakushambadzira kwekutsvaga, imwe inoda dzimwe nzira dzekudhijita dzakadai seSeO ne SMM. Iyo nzira mbiri dzinganzwika zvakafanana kune webhizimisiuyo haasi kukurukurirana nemunda wekutengesa digital. Semuenzaniso, SEO inogona kusanganisira mazwi ekutsvaga achitsvaga nhepfenyurokushambadzira kunosanganisira kubhadhara kushambadzira Nzira idzi mbiri dzinogona kubatsira pamabhizimusi akawanda epaInternet kunyanya kana munhu achiziva mutsauko.
Jason Adler, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt Digital Services, inopa dzimwe pfungwa dzinokosha dzinogona kusiyanisa SEO kubva SMM:
Search Engine Optimization (SEO) - logiciel gratuit de gestion de projet.
Aya ndiwo mazano muhutamburu hwekuvandudza iyo inotarisira kuwedzera kuonekwa kwewebhusaiti yako pane injini dzekutsvaga, kunyanya kana imwe yekakani mubvunzo yekutsvaga. SEO inobatanidza vazhinji pa-site uye kunze kwe-site zvinhu kuti vawanetraffic kubva kunjini dzinotsvaga. Kune mutengesi wedhijitari. Izvo zvinangwa zveSOO chero ipi zvayo inobudirira ndeyekuwana nzvimbo inofanirwa kuiswayekutsvaga injini yemigumisiro yeiyo yakagadzirirwa ye keywords. Izvi zvakakosha nekuti unogona kukunda mupikisi wako, tora mvumo itsva yehutambiuye zvinonyanya kukosha, kuwedzera kuchinja. SEO inosanganisira kushandisa nzira dzakadai se:
Keywords keyword search
Search Engine Marketing (SEM) inzira yakasiyana yekutsvaga muIndaneti.SEM ndiyo inonyatsorongedzwa. Inosanganisira kuisa zviziviso zvakatsvaga pane mamwe mapeji emagumisiro ekutsvaga ehupenyu..Izvi zvinosanganisirabidding. Vamwe vanhu pane mamwe mazita evanhu vachaona mvumo yako kwenguva yakati. Iyi nzira inoshandiswa zvakanyanya pamusana payo isina kusimbapay-to-click automation.
Kunyange zvazvo SEO inounganidza motokari kuburikidza nekutsvaga injini, SMM isati iri imwe digitalmarketing marketing. SMM inonyatsoshandisa mashandisirwo ezvehupfumi sezvinodiwa pakuwana vashandi veIndaneti. Zvemagariro ehupfumi zvinokonzera hurumende yakakurumbiranetwork sites like Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest uye LinkedIn. Vatengesi mundima iyi kuwedzera mazita ekuziva, kuunganidzaemaimeri, kuwana hukama uye kuwedzera mararamiro avo emiganhu vachishandisa nzira dzakawanda dzinowanikwa mune zvemagariro evanhu. Somuenzaniso, Facebook inesarudzo yekubhadhara matangazo. Izvi zvinoshandiswa zvinotarisana nehuwandu hwevanhu hunonyatsogadziriswa newe. Mamwe marangire ekudhindamitsara mumagariro evanhu anosanganisira:
Mavhidhiyo akaita seYouTube kana Vimeo
Image kugovana se Instagram uye Pinterest.
Tsika, zvose SEO neS SMM chinotarirwa kuwana vatengi kune webhusaiti. Pasineimusiyano, ivo vanowedzerawo chiziviso chemavara kune vashandi. Kune rumwe rutivi, kutendeuka kwemuenzi kunemutengi haasi kunyanya kuvimba navo. Zvimwe zvinhu zvakadai sewebhu web design zvinoshanda.
Makambani anoda kubudirira muIndaneti vanoda kutengeswa kwema digital, Zvisinei,mazwi akafanana neSearch Engine Optimization (SEO) uye Social Media Marketing (SMM) inogona kuvhiringidza. Zvose zviviri SEO neS SMM zvinodhindisa kudhindamaitiro. Kakawanda, vanoedza kuwedzera kuonekwa kwemavara uye kunyanya kukosha, kuwana vatsva vatengi paIndaneti. Zvisinei, izvi zviri zvivirizvakasiyana nenzira yavanoita. Semuenzaniso, SEO inosanganisira kuwedzera kuonekwa mune huru yekutsvaga injini apo SMM inoreva kuwedzerabrand awareness using social media. Mukunzwisisa kusiyanisa kwavo, mazano ose maviri anodiwa uye anogona kutora nguva refukune rimwe bhizimisi kana rikaitwa zvakanaka.